Guddoomiye Ku Xigeenka Wakiillada iyo Wefti Uu Hogaaminayo Oo Gaadhay Laascaanood - Somaliland Post
Home News Guddoomiye Ku Xigeenka Wakiillada iyo Wefti Uu Hogaaminayo Oo Gaadhay...
Laascaanood, (SLpost)- Wefti ballaadhan oo uu hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Wakiilladda ee Somaliland Baashe Maxamed Faarax, ayaa shalay gaadhay magaaladda Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Weftigaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirradda Hawlaha guud iyo guriyaynta Cabdirisaaq Khaliif Axmed iyo wasiirka waxbarashada Faarax Cilmi Geedoole iyo masuuliyiin ka socda shirkadda Hass Petroleum oo doonaya in ay mashaariic ka soo hirgeliyaan gobolka Sool.
Markii ay weftigaasi gaadheen magaaladda Laascaanood si weyn u soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo heer degmo.
Iyadoo munaasibad lagu soo dhawaynayay weftigaasi lagu qabtay magaaladda Laascaanood, taasi oo ay hadalo ka jeediyeen masuuliyiintii weftiga ahaa iyo sidoo kale masuuliyiinta heer gobol iyo degmo ee Sool.
Gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha Wakiiladda oo hadal ka jeediyay munasibadaasi ayaa ka waramay ujeedada safarkooda, isagoo masuuliyiinta gobolka ee soo dhaweeyayna uga mahad naqay sida fiican ee ay u soo dhaweeyeen.
Waxaanu yidhi “Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aanu nimaadno Laascaanood, gudoomiyaha gobolka, Maayarka, taliyaha booliska, shaqaalaha kala duwan ee dawlada ee nagu soo dhaweeyay Laascaanood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. socdkayga maanta (shalay) waxa uu ahaa in Cabdinaasir oo ah gudoomiyaha shirkadda Hass iyo Car inay dhagax dhigayaan iskuulo boodhin ah, mid gab-dhaha ah iyo mid wiilasha ah oo laga hir galinayo gobolka oo ay u dhagax dhigayaan wasaaradda waxbarashada oo uu wasiirku inagala socdo”.
Mudane Baashe Maxamed Faarax, waxa kale oo uu intaa ku daray “Magaaladani waa magaaladaydii, waxaanan ku faraxsanahay horumarka ka socda. Waxaanu ku farax sanahay nabad gelyadda, waxaanu ku faraxsanahay maamulka isku xidhan ee wada shaqeeya. markaa waxaan aad iyo aad ugu faraxnay horumarka Laascaanood, waxaasna waxa keenaya waa nabad galyada”ayuu yidhi guddooiye Baashe.
Guddoomiyaha gobolka Sool Yaasiin Maxamed Shide, oo isna halkaasi ka hadlay ayaa weftigaasi uga mahad naqay booqashadooda ay ku yimaadeen Laascaanood.Waxaanu yidhi “Waxaan idin leeyahay Gudoomiye ku soo dhawaada adiga iyo golaha wsiirada ee aad hogaaminayso, guud ahaan gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood.
Sidaad ka warhaysaan gobolka wuu nabad qabaa, Wax dhib ah oo jiraa ma jirto ee horumarkiina iyo waxa aad ka qabateena waad arki doontaan, halka uu maraayo, haddii ay wadooyinka noqoto ama isteeshinada ama goobaha waxbarshada, waxaan idin leeyahay mar labaad ku soo dhawaada gobolka”.
Sidoo kale waxaa halkaasi hadallo ka jeediyay masuuliyiin uu ka mid ahaa maayarka magaaladda Laascaanood, taliyaha qaybta booliska Sool iyo xildhibaano ka tirsan golaha degaanka Laascaanood.